Yarra Council - Rubbish and Recycling Somali
You are here: Home > Services > Rubbish and Recycling Somali Print Page
Rubbish and Recycling Somali
Qashin, Dib-urogid, Qashinka adag, Qashinka cagaarka ah
Golaha degmada waxay qaadaan qashinka iyo waxyaallaha dib loo rogayo asbuuc walba. Fadlan xaqiiji in biinka qashinkaaga iyo biinka dib-u-rogidu ay yaallan wadada qarkeed habeenka subaxeeda la qaadayo, ama ugu dambayn 5.00 subaxii maalinta la qaadi doono. Qashin qaadidaada waxaa go’aamisa meesha aad ku nooshahay. Khariidada Degmada Yarra waxay muujinaysaa maalmaha laga qaado meel walba:
U dhigida wadada qarkeeda biinkaaga qashinka iyo kan dib-u-rogida sida saxda ah waxay u sahashaa kuwa qaada inay si sahala u qaadaan. Sax u dhigida waxaa ka mid ah:
• Biinka laga waxyar laga fogeeyo wadada qarkeeda
• In biinka afkiisu 10 ilaa 100 sentimitir ka fog yahay wadada qarkeeda • In daboolka si buuxda loo xiro
• Biinka in aanu ku beegnayn gaari meesha yaal
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa in aad biinka dib-u-rogida aad joogto u isticmaasho. Kaasi waa biinka daboolkiisu yahay jaallada. Alaabta dib loo rogi karo laguna ridayo biinkaa waxaa ka mid ah:
? Dhamaan galaasyada iyo dhalooyinka
? Kartoonada caanaha iyo cabitaanka ? Dhalooyinka caaga ah iyo weelasha wax lagu shubo
? Dhamaan birta daasadaha buufiska
? Dhamaan almuuniyamka iyo foilka ? Warqadaha, jaraaidka, magaasiinada iyo kartoonada
Alaabada qaarkeed lama geliyo biinka dib u rogida sida:
? Baagaga balaastiga ah ? Polystyrene (waxyaallaha xumbada laga sameeyo)
? Wixii cuntada ka hara
? Daasadaha ranjiga
? Suxuunta iyo waxyaallaha wax-karinta
? Naabiyada ? Qalabka korontada
Biinankaaga waxaa iska leh Golaha degmada. Haddii aad guri kale u guurto, fadlan kaga tag biinkaaga gurigaad ka guurtay. Haddii aad guri u guurto oo aan biin oolayn guriga sabab uun darteed, fadlan la xiriir Golaha degmada 9205 5555 si aad u codsato biin cusub.
Goluhu wuxuu kaloo siiyaa deganayaasha adeega qaadida qashinka cagaarka ah iyo kan waaweyn. Taasi waa marka Goluhu yimaado gurigaaga taarikkh cayiman kana qaado qashinka waaweyn.
Deganayaashu waxay codsan karaan in laga qaado sanadiiba LABA jeer qashinka waqtiga iyaga u fiican. Qashin kasta oo la qaadayaa wuxuu noqon karaa xamuulka taraylarka caadiga ah (amah al kuyuubik mitir), sheeyadu waa in aanay ka dheeraan 1.5 mitir waana in qof ama laba qof si sahala ku qaadi karaan.
? Telefishanada, VCRs-ka, stiiriyo iyo wixii la mid ah
? Alaabada adeegsiga sida mishiinka dhar dhiqida, qalajiyayaasha, firiijka, oofanka (albaabada la bixiyey)
? Qalabka guriga ee yaryar iyo fadhiga
? Adeega biyaha kulul
? Qalabka baabuurta yaryar
? Taayirada gaariga caadiga ah (ilaa afar xabbo)
? Daasada ranjiga oo eber ah oo aan daboolayn
? Baaskiilo ? Dhar ay ku jiraan gogosha sariirta iyo dhamaan kuwa la qaadan karo ? Kabaha dhamaantood
? Waxyaallaha ka samaysan maqaarka sida boorsooyinka, suumanka iwm ? Qalabka adag, tooyiska jilicsan iyo gaymamka
? Dusuuda ay ku jiraan disiyadu, kan wax lagu shiilo, mindiyaha ? Buugaagta
? Baagaga balaastiga ah (ku rid dhamaantood baagaga balaastiga ah isku meel)
? Waxyaallaha balaastikada ka samaysan kuwaas oo ay ku jiraan baaldiyada baafafka dhar dhiqida
? Dhamaan noocyada wax qorida (ku rid balaastik baag gaara)
? Moobaylada gacanta, batteriga iyo wixii loo adeegsado
? Laguma dari karo qalabka dhismaha sida waxyaallaha lagu cusboonaysiiyo alwaaxda ? Laguma dari karo qalabka cagaaran, qashinka jardiinada, wasakhda ama dhagxaanta ? Kuma jiraan dhalooyinka gaasku ? Laguma dari karo qalabka ay ka midka yihiin kiimikada iyo ranjiga
? Laguma dari karo qashinka ganacsiga ? Laguma dari karo qashinka guriga ama kan dib u rogida ? Sheyna waa in aanu ka weynaan 50kg ? Laguma dari karo taayirada 4WD ama baabuurta waawey ? Laguma dari karo qaybaha baabuurka
Deganayaashu waxay ballansan karaan qashinka cagaraan oo aan XAD LAHAYN in laga qaado waqtiga iyag u fiican. Dhamaan laamaha waa in xarig la iskula xiraa ama la isku lamaaniyaa, MAAHA silig ama caag, iyaga oo rabdad-rabdad ah waana in aanay ka dheerayn 1.8m (6ft) dherer ahaan 30 sentimitir (1ft) wareeg ahaan.
? Laamo la isugu xiray wadajir ama mataanayn
? Cagaarka la jaray ama kuwa ku jira weel sida sanduukh kartoon ka samaysan oo adag
? Laguma dari karo balaastik bag
? Laguma dari karo ciid ama xidido ? Laguma dari karo dhirta wiidka, ivy-ga ama blackberry
? Laguma dari karo silig, bir ama balaastik
? Laguma dari karo qashinka adag
Sida loo qaadayo qashinkaaga adag ama cagaaran:
Wac Golaha Degmada Tel 9205 5555 si aad balan u samaysato.
Golaha degmada ayaa kuu sheegi doona maalinta la qaadayo, kuna weydiin doona alaabta la qaadayo iyo xajmigooda si loo qaado. Golaha ayaa sidoo kale kugu waanin doona meesha ugu fiican oo la dhigayo qashinkaaga.
Habeenka ka horreeya maalinta qaadida, si fiican oo habaysan u dhig alaabtaada meesha la isku raacay.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan qashinka, dib-u-rogida, qashinka waaweyn iyo kan cagaraan ee Yarra, fadlan wac Golaha 9205 5555 ama booqo www.yarracity.vic.gov.au/services. Waxaad kaloo la hadli kartaa qof afkaaga ku hadlaya adigoo wacaya adeega turjubaanka golaha 9280 1940.